Bare Sare Cismaan Salaad oo Sharaxayo Doodda Kenya
Bare Sare Cismaan Salaad
Dowladda Soomaaliya ayaa xalay soo saartay warsaxaafadeed ay kaga jawaabeyso tallaabadii ay Jimchii qaaday dawladda Kenya ee ay kula soo laabatay safiirkeeda Soomaaliya, halka kii Soomaaliyana ay dalkiisa u dirtey.
Dawladda Soomaaliyaayaa warsaxaafadeedka ay soo saartay ku sheegtay in ay u ballanqaadayso Kenya in aysan ku kicin falal dhinac keliya ah oo ku saabsan degaanka lagu muransan yahay ilaa inta maxkamadda Hague ee ay dacwadda muranku ka socoto ay go-aan ka gaareyso .
Hadaba, Jawaabta dowladdu bixisay maxey ka tari kartaa dejinta xiisaddan labada wadan ka oogan? Maxeyse ka dhigantahay in Soomaaliya ay suuqgeyn u sameeyso hadiiba sida ay ku doodeyso ay runtahay in macluumaad shidaal oo aysan ku jirin lakabyo dhuleedka lagu muransanayahay? Su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Jaamac Buule Jaamac weydiiyay Bare Sare Cusmaan Salaad Xirsi, oo maadada Jiyoolajiga ee dhulka iyo macdanta ku jirta ka dhiga Jaamacada Regina, Kanada.
Wareysi Bare Sare Cismaan Salaad Xirsi